Hirgalinta faylka CAD-ga ah - Geofumed
Juunyo, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps
Inkastoo ay tahay maaddo badan oo asaas ah, badanaa waxay ku muuqataa liiska qaybinta iyo Google weydiimaha. Ma aha wax yaab leh, design computer-dhameeya ayaa muddo dheer diirada of Engineering, Naqshadaha Dhismaha iyo Dhismaha halka arrinta geospatial ayaa xiriirka u janjeedha maamulka dal. Ma ilaawi karno maalin kasta labadaba isku dhejinta, illaa iyo labadaba AutoCAD iyo Microstation labadaba waxaa ku jira georeferencing sida muuqaal guud oo laga soo qaaday qoraallada dhawaan (AutoCAD 2009 ilaa AutoCAD 2012 y Microstation XM ilaa V8i).
Inkastoo a Dwg ama a Dgn waxay lahaan karaan jahwareer lagu muujiyey barnaamijyadooda, in la furo dalab GIS ah oo aan ahayn mid ka mid ah soo saaruhu waxay u maleynayaan in faylka uusan haysan meel juquraafi ah. Tani sidan ayaa ah dardargelinta feylasha CAD-du weli waa barnaamij ka mid ah barnaamijyada isla hal brand, hadda. Ma ahan barnaamijka GIS wax yaabab ah haddii feylku uu ku jiro cutubyo qariib ah ama meel khalad ah Cartesian.
Aan aragno goorta, sababta iyo sida AutoCAD inkasta oo ay la mid tahay barnaamij kasta oo CAD ah.
Sababtoo ah mawduucyada kala duwan ee CAD-du waa mid murugsan
Ujeedooyin wax ku ool ah, qorshayaasha dhismayaasha aan sameyno iyaga oo aan ka fekereyno dusha sare, tani waxay leedahay sababo kala duwan:
Waxaan samaynaa qorshayaal raadinaya isuduwidda shaashadda. Iyadoo dunida dhabta ah dhismaha waxaa wareejiyo qaraabo xagga woqooyi juqraafi, marka in yar oo ay barbaro galeen in ina xiiseynaya, aan door bidaan in ay isku shaandheyn calaamad woqooyi diyaaradda.
Guud ahaan qorshayaasha waxaa loo sameeyey ujeedooyin wax dhisid ah, sidaa daraadeed waxaan raadineynaa siyaabaha fududeynaya abuurista jarista iyo wajiyada, iyo sidoo kale la qabsiga abuurista Layouts waafaqsan joomatariga.
Inkasta oo ay jiraan qaabab ay u abuuraan nidaam tixraaca particularized, ma aha wax ku ool ah si ay ula a orientation macquulka yar shaqeeyo, ugu yaraan marka ay soo dajiyaan qorshe ku hoos format dhaqanka iyo halka ku dhowaad wax walba waxaa loogu talagalay orthogonally.
Marka aan u baahanno khariidada goobta, sida caadiga ah waxaan ugu yeernaa sawir, orthophoto ama khariidadda cadawga, waxaan u leexineynaa oo kobcinaynaa ujeedada faahfaahinta, laakiin marar dhif ah ayaan tixgelineynaa in aan shaqeyno hal mar meelahan.
"Farsamaynta runta ah ee dhismaha waa in ay ka muuqataa inta badan shaqadooda aragtida aadanaha, Farsamada farsamoyaqaanku ma qeexi karo dhismaha."
Mashruuca dhismaha ee aan isticmaalo tusaale ahaan
Sababta loo soo gudbiyo joornaalka waa daruuri
Habka ugu classic in la sameeyo qorshe ku beddeleen, hordhaca ah ee Qaabaynta ka dhigaa si tartiib tartiib ah ula qabsan barnaamijyo functionalities ah oo jeexan 3D shay ama guriyo ka shaqaynayaan natiijada.
Inkastoo tani ay tahay isbeddel, xaaladaha intooda badan waxay sii wadi doontaa in ay ka sameysanto warshad 2D. Laakiin waa in aynaan illoobin in tani ay tahay mid aan dib u dhicin, baahida loo qabo in lagu sameeyo muraayadaha falanqaynta isbeddellada xaddiga ah iyo habka BIM si kordhaya u soo jiidatay Codsiyada CAD, sida lagu arkay Revit ama ArchiCAD.
Maxaa loola jeedaa jahwareer.
Si loola socodsiiyo, ugu yaraan afar dhinac waa in la tixgeliyaa:
1 U diyaari cutubyada ilaa mitir. Haddii aan u direyno nidaam la saadaalinayo UTM, waxaa lagama maarmaan ah in unugyada ay yihiin mitir. Xaalado badan, diyaaradaha ayaa la qaadi karaa iyagoo qaadanaya cutubyada millimitir ama xitaa dhejinta nidaamka Ingiriisiga.
Tan waxaa lagu sameeyaa amarka Halbeegyada. Halkaasna waxaan ku bedelnay muujinta nooca muraayadda illaa tobanaad iyo halbeegyo inches ilaa mitir. By isbadelka ogaaday in bar xaaladda oo badala qaab bandhigay, laakiin tani ma aannu qiyaasta sawirka beddelay, oo haddii aan u cabbirno albaab waa in loo qiyaaso 2.30 u muuqataa sida 92 matalaya inches oo wakiil ka ah 7 '- 7.'
Sidaas awgeed waa in aad kor u qaadaa hal-abuurka hal-abuurka, xaaladdan oo kale u dhiganta isugeyntii mitir ilaa mitir, waxay noqon kartaa 0.0254.
Amarka ayaa la fuliyaa miisaanka, waa tixraac tixraac ah, qodobka cabbiraadda waa la qoray kadibna geli.
2 U dir faylka a Isku duwaha UTM.
Waayo, kan loo yaqaan wadataa juqraafi waxaa looga baahan yahay, sidoo kale waxaa laga heli karaa la GPS a, ka orthophotos georeferenced, map cadastral ayaa barbaro dhismaha ama ugu dambeyntii Google Earth saxsanaan halista. Xaaladdan, tusaale ahaan ujeedo waxaan isticmaalaa Google Earth:
Dhibcahaas waxaa lagu soo rogay amarka dhibic.
Amarka ayaa lagu qoray dhibicwaxaa la sameeyaa geli, isku-duwiddu waxay ku qoran tahay foomka 3273358.77,4691471.10 ka dibna la sameeyo geli.
Sidoo kale barta kale. Ka dibna sawirkii aan ku dhaqaaqi doono oo dhan waa la soo xulay:
Amar Guuri, waxaan ku dhejineynaa barta bilawga ah ee u dhiganta geeska sawirka iyada oo aan dhaqaaqin, kadibna waxaanu qoraynaa xiriirinta 1; si aynaan mar kale u qorin waxaan u isticmaalnaa fallaadhaha kursiga oo kor iyo dib u soo kabashada waxa aan horey ugu soo qornay tallaabada hore.
Si aad u sameyso geli, sawirku wuxuu naga gudbin doonaa aagga xiisaha leh sida ku cad muuqaalka. Waa inaan isticmaalnaa amarka xadka qiyaasta si aad u aragto Ama laga soo qaado kumbuyuutarka z, gal, oo gal.
Haddii aynaan si fiican u eegin qodobada, waxaad bedeli kartaa qaabka adeegsiga amarka ddptype.
3 U diyaari sawirka
Hadda waxa la la'yahay waa in la sameeyo wareegga sawirka ee ka yimaada dhinaca bidix ee aan ognahay inay fiican tahay.
Waxa ay dooraneysaa wax kasta oo loo badalayo, amar rogaa, xagasha wareegga waxaa lagu calaamadiyey adigoo gujinaya dhibicda bidix (macmacaanka macmalka ah), xulashada ayaa la doortaa tixraaca, guji labada dhibcood ee qeexaya vector rotate, marka hore dhibic muuminka iyo ka dibna dhibic cas.
Tallaabadani waxay la mid tahay isticmaalka amarka wareega leh saddexda mitir ee Microstation, inkasta oo halkan hoose loo qaaday saldhigga.
Maxaa kale oo ku lug leh joornaalka?
Tani, feylka ma aha mid juqraafi ah. Waxa aan qabannay waa in la dhigo nidaam isku dheelitiran, oo ay waqooyigu kudhexayso woqooyiga juquraafi iyo goobta ay la socdaan isuduwidda UTM.
Had iyo jeer markaad ka soo wacdo codsiga GIS, nidaamku wuxuu ku weydiin doonaa xog isku mid ah oo ku lug leh saadaalinta iyo Datum. Haddii aan go'aansano in aan sidaan sameyno oo leh barnaamij GIS iyada oo loo marayo nidaam joogto ah waa in aan xusuusanno in ay kaliya sidaas samayn doonto modelah qaabka waa la lumin doonaa xitaa hantida xml marka dib loo dhoofiyo dxf.
AutoCAD waxay keenaysaa qalab loo yaqaan geographiclocation, in aan aragno maalin kale, iyo sidoo kale ikhtiyaarka ah baaxada iyo mashruuca ee Microstation.
4 Tixraacyo dibedda ah
Sameynta nidaamkan wuxuu noqon karaa oo kaliya ujeedada ku-meel-gaarka ah ee sameynta xayawaanka 3D, taas oo ku filan in loo diro warshadda dhismaha. Haddii aan dooneyno in aan samayno sida ficil dhab ah oo ku wajahan mashaariicda dhamaystiran, waa in aan tixgelinno tixraacyada dibadda -in aan isticmaalno si aan u badbaadino nala shaqeyno faylasha aad u ballaaran ama isku-dhafanayaasha kala duwan- laakiin taasi waxay ka tarjumaysaa kala soocista faylasha isuduwidda ee goob shaqo. Haddii aan taas ku sameyno feyl, waa in sidoo kale la hagaajiyaa.
Sidoo kale xaqiiqda ah in mararka qaarkood isla faylka la duubo gudaha model, oo loogu talagalay daabicidda ... isagoo weli ka fikiraya luminta Layouts.
"Oognayd meel kasta, meel kasta oo aad naftaada ciday ka heli, iyo in, kaliya in, aad noqon kartaa ugu farxadda badan ama ugu qadhaadh saacadaha aad."
Waan ogahay, qayb ka mid ah boostada waa awood, dhammaadka waa wax gaabis ah; laakiin ugu dhakhsaha badan ama ka dib waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo, in dheeraad ah haddii macaamilku inooga muuqdo in rabo in uu arkaan wax sidan oo kale ah:
Post Previous«Previous Wargeysyada 3, 3 mawduucyada
Post Next 4 sano ee Geofumadas, casharradii 4 ee la bartayNext »
19 Jawaab in "Georeferencing CAD"
Janaayo, 2020 at
Faa'iido leh oo fudud. U qalmin wax kayar 10
Maqaalka waa mid aad u fiican.
Waa dhibaato dhammaanteenna waxaanuna isku daynaa inaan xallinno.
Marar badan oo aan ku guuleysan.
Waa maxay ilaha sawirka satellite-ka?
hello aan su'aal waa aan inta badan la geolocation 3d sokeeye ka shaqeeyaan, oo waxaan duwo 600 dhibcood, iyo qadarka xogta si 3d rayidka ah iyo waxaan georreferenciarlo, meel ka dibna 3d sokeeye ee image satellite waa kharibi waxaa jiri doona amartaa inay noqon more aragti site.
Ccvff isagu wuxuu leeyahay:
Hello aad u fiican
Waa hagaagsanayn in aad ka jawaabi lahayd, waxay noqon lahayd inaad aragto haddii aad si sax ah u soo gashay dhibcaha asalka ama meesha.
Hello, waxaan ka dhigay joogtada ah iyo ma iga tegi, u qaadan in marka aad guurto sawirka meesha aad u baahan tahay (la wadataa ah), u dhaqaaqo meel cusub in farta waa in aad horey u soo wadataa sax ah, oo taydii ma i sii aan iskudaridyada qaarkood iyo heerarka sare ee aan lahayn wax la xiriira dhibta aan u baahanahay, sidee u sameeyaa?
Waa hagaag, waxa ugu horeeya waa in la galo isku-duwiddaaga juqraafi ee ku jira faylka CAD.
Ka dibna wac faylka CAD ee tixraaca, kuna dhaqaaq oo u beddel sida koollooyinka loo aqoonsaday.
Jordi isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u qorayaa inaan ku caawiyo qodobkan. Waxaan runtii u badanahay jimicsi waxaan isku dayaa inaan sameeyo, laakiin ma helayo, ama ma fahmin tallaabooyinka oo dhan.
1. Waxaan haystaa feyl (cad) oo leh guri aan lahayn daraasad.
2. Waxaan heystaa faylal sare oo leh 50 UTM si toos ah u qaata dhulka duulimaadka.
3. Hadafku waa in dusha laga saaro diyaaradda iyo inuu galo UTM inuu noqdo dhibco.
Tilmaamahan ayaa markaa u adeegi doona in ay sii wadaan ka shaqaynta sawirka, taas oo horeyba loo dhisi doono, laakiin tani maaha mid aad u qadarin, su'aalaha.
Waad ku mahadsan tahay websaydhada si aan u buuxinno kuwa aan jecel nahay cad, oo waxaan dhihi karnaa haddii qof uu kari karo gacanta, wuxuu ka hadli karaa inaan sameeyo ama la sameeyo maqaal si aan u sameeyo dhamaan tallaabooyinka la sharraxay.
Waxaad bedeleysaa qaabka loo yaqaan 'UTM', waa qaabka guud.
ARQUI73 isagu wuxuu leeyahay:
waxa kaliya ee aanan fahmin ahaa sidee baad dhibcood ee X iyo Y, sababtoo ah in aan dhulka google i siiya isla isuduwaha kuwaas 25 ° 43'29.97 "N - 100 ° 22'39.55" O, ama haddii aan ka odhan kari waayeen sida bedesho dhibcood X iyo Y, mahad ...
Waxa aad sheegaysaa waa run. Haddii ay jiri lahayd halbeeg ay samayn karaan soo-saarayaashu ... in kasta oo ay hubaal tahay in aanu fududahay.
Faylasha 'CAD' waa inay lahaadaan feyl "caalami ah", taas oo ah, in juquraafi ahaan loo aqoonsan yahay iyadoon loo eegayn cidda soo saartaa. Waxaan caadiyan ku qasbanahay inaan faylalka DWG juquraafi ee sahaminta ku saleysan muuqaalka leh ee leh orthophoto, kaas oo marar badan ArcGis uusan aqoonsaneyn waxaan ku iri juquraafi ahaan. Hambalyo maqaalka, waxaan u arkay inay tahay mid wax ku ool ah. Salaan
Xaqiiqdii, ma aanan arkin dalabyo badan oo ipadka ipadka ah oo kuu oggolaanaya inaad furto faylka kmz. Waxa dhaca waa in “kmz” uu yahay fayl la soo buuxiyay (sida .zip ama .rar), oo ka kooban hal ama dhowr kml iyo muuqaallo joreferenced ah ama ku jira isla faylkaas kmz.
Iskuday inaad aragto sida ay shaqadan u socdaan: KM Lo Loading, Tifaftiraha Khariidadayda, Khariidad-muuqaal, Daawashada POI, Tifaftiraha Khariidadda, GPS-Trk
Ugu fiican waa GIS Pro, laakiin qiimo badan oo lacag ah.
Dhibaato kale ayaa ah in inkastoo qaar ka mid ah codsiyadan ay ku andacoonayaan in ay taageeraan kumbuyuutarka kumbuyuutarka, qaar ka mid ah moodada Google Earth ee loogu talagalay iPad-ka, tanina uma bannaana dhammaan dalalka, gaar ahaan Latin America.
Isniinta Undurraga isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u hambalyeynayaa aad on your blog, waxaan rabay in aad weydiiso raalli ah, haddii aad iga hadli karo sidii aad ku shuban kartaa diyaarad in uu ahaa CAD oo waxay u leexatay galay geesoolayaasha ah (photo) si KMZ file (KML) iyo Anigu taas ma arki kartaa on my Ipad. Waxaan isku dayay wax kasta oo aan awoodo. Waxa ay u muuqataa wax iska cad, laakiin ma aha sida. Waxaa jira qaar ka mid ah codsiyada in aynu aad ku shuban KMZ, laakiin aad bay u kooban (jagooyinka oo kaliya), Waad ku mahadsan tahay!
Courier isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo boog blogga waa mid xiiso leh sidan oo kale.
Waad ku mahadsantihiin maqaalka, wax aad u xun !!